Alemana:NANDROTSAKA 60 TAPITRISA EUROS -
AccueilRaharaham-pirenenaAlemana:NANDROTSAKA 60 TAPITRISA EUROS
Ho mariky ny fiverenan’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana Alemana sy Malagasy, dia nanome vola 60 tapitrisa Euros ho an’ny fanjakana malagasy ny fanjakana Alemana. Nandritra ny dinika ara-politika teo amin’ny solontenan’ny firenena roa tonta no nanaovana sonia ny fanomezana io vola io. Dinika izay nifarana androany tolakandro. Nanamafy i Harald Gehrig masoivohon’i Alemana miasa sy monina eto amintsika fa tsy haverina akory ity vola 60 tapitrisa Euros ity fa tsy trosa akory. Nahatsapa mantsy ny firenena Alemana, fa mbola tena ao anatin’ny fanarenana ny fahavoazana vokatry ny krizy nanomboka tamin’ny taona 2009 ny mpitondra ankehitriny. Raha tsiahivina, dia efa tamin’ny taona 2008 no tapaka ny fiaraha-miasa teo amin’ny fanjakana Alemana sy Madagasikara. Tamin’ity taona 2016 ity kosa vao niverina indray izany, ary avy hatrany dia noporofoina tamin’ny alalan’izao fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa izao. Ho fanampiana ny mpitondra amin’ny fanarenana ny firenena, sy ho fametrahana fampandrosoana maharitra eto Madagasikara araka izany ity fanomezana natolotry ny fanjakana Alemana ity.
Hivelatra amina sehatra maro ny fampiasana ilay vola, dia ny eo amin’ny ady amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, sy ny famokarana angovo azo havaozina, ary ny fametrahana fampandrosoana maharitra. Misy ihany koa ny ampahany hanatsarana ny tontolony fahasalamana, sy ireo sehatra maro hafa. Raha ny nambaran’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana OIivier, dia tsy nivaona tamin’ny drafi-pampandrosoana « PND » efa napetraky ny filoham-pirenena ny ampiasana ity vola nomen’ny fanjakana Alemana ity. Notsindriany ihany koa nandritra ny lanonam-pamaranana ity dinika ara-politika ity, fa santatra noho ny fiverenan’ny fiaraha-miasa ihany izao fihetsika nataon’ny fanjakana Alemana izao. Hitohy, ary hihamafy hatrany mantsy ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta. Ny tanjona, dia ny hampiakarana hatrany ny fari-piainan’ny vahoaka malagasy, ka hivoahana amin’izao fahasahiranana lalina vokatry ny krizy nifandimby teto amin’ny firenena izao raha ny nambaran’ireo solontenan’ny firenena roa tonta nandritra ity lanonam-pamaranana notanterahina teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo ity. Manao ranolava araka izany ny fanomezana avy amin’ireo firenena any ivelany noho ny fahitan’izy ireo ny ezaka ataon’ny mpitondra ho fampandrosoana ny firenena.
Efa ela no tokony ho tontosa ny fitsidihana an’i Japon taorian’ny fanasana izay nataon’ ny praiminisitra japoney, hoy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, saingy noho ny fifidianana tany Japon , fanovana governemanta japoney dia izay vao ...Tohiny